ROM 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (ROM 3)
Ọ̀ dị uru pụrụ iche mmadụ nwere nꞌihi na ọ bụ onye Juu? Gịnị bụkwa uru ahụ dị ukwuu nke ndị e biri ugwu nꞌusoro omenala ndị Juu nwere?
Ọ bara uru nꞌụzọ nile na mmadụ bụ onye Juu. Nke mbụ, ọ bụ ndị Juu ka e weere okwu Chineke nyefee nꞌaka.
Tụfịakwa! Chineke ekwela! Ọ bụrụdị na mmadụ nile nọ nꞌụwa aghọọ ndị okwu ụgha, eziokwu nke Chineke ga-adịgide. Nꞌihi na e dere nꞌakwụwkọ nsọ sị na okwu ọ bụla Chineke kwuru ga-abụ eziokwu mgbe nile. Ka e si otu a mee ka Chineke bụrụ onye mmeri mgbe ọ bụla onye ọ bụla jụrụ ajụjụ banyere okwu ahụ.
Ọ bụrụ na ajọ omume anyị na-eme ka ezi omume Chineke pụta ìhè, gịnị ka anyị ga-ekwu? Anyị ga-asị na Chineke adịghị eme ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ọ taa anyị ahụhụ nꞌihi ajọ omume anyị? Ana m ekwu okwu a dị ka ndị mmadụ si ekwu ya.
Ọ̀ bụ ụdị okwu dị aṅaa dị nke a? Ọ bụrụ na ihe esi otu ahụ mee, oleekwanụ otu Chineke ga-esi kpee ụwa ikpe?
Nꞌihi na ọ bụrụ na a na-esite nꞌokwu ụgha m na-ewetara Chineke otuto, ebe ọ bụ na okwu ụgha m na-eme ka eziokwu Chineke pụtazie nke ọma, gịnị mere a ga-eji maa m ikpe mmehie?
Nꞌihi na ọ bụrụ na ajọ omume m na-ewetara Chineke ezi otuto, mgbe ahụ ihe anyị ga-ekwu bụ na ọ dị mma ka anyị nọgide na-eme ihe ọjọọ ka ihe ọma si na ya bịa. (Nꞌezie, ọmụma ikpe na-eche ndị na-ekwu ụdị okwu a bụ ọmụma ikpe ziri ezi.) Ma ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ụdị okwu a ka m na-ekwusa.
Ugbu a, ọ̀ dị ụzọ anyị bụ ndị Juu si ka ndị ọzọ mma? Mbaa! O nweghị ụzọ anyị si ka ha mma. Nꞌihi na e meela ya rị ka ọ pụta ìhè na mmadụ nile bụ ndị mmehie, ndị Juu na ndị mba ọzọ.
Akwụkwọ nsọ ekwuola ya sị, “Ọ dịghị onye ọ bụla dị mma nꞌụwa. Ọ dịghị onye ọ bụla, ọ bụladị otu onye nꞌụwa bụ onye ezi omume.
“Ọ dịghị onye ọ bụla na-aghọta, ọ dịkwaghị onye ọ na-agụ agụụ igbaso Chineke.
“Mmadụ nile esila nꞌebe Chineke nọ kpafuo. Ha nile emehiela. Ọ dịghị onye na-eme ihe dị mma, ọ bụladị otu onye.
“Okwu na-esi ha nꞌọnụ apụta bụ okwu rere ure, nke na-esi isi dị ka isi na-esite nꞌili ghe oghe na-apụta. Ire ha jupụtakwara nꞌokwu ụgha. Okwu ọjọọ ha na-ekwu nwere ike igbu mmadụ. Ọ dị ka elo si nꞌọnụ ajụala apụta.
“Nanị okwu ilu jupụtara ha nꞌọnụ.
“Ihe ha na-eme ọsịịsọ bụ igbu ọchụ na imerụ mmadụ ahụ.
Ebe ọ bụla ha gara, ha na-eweta mbibi na nsogbu nye ndị ahụ.
Ha amaghị ihe a na-akpọ udo.
“Ha amụtabeghị ihe ịtụ Chineke egwu bụ.”
Anyị maara na idebe iwu dịịrị ndị ahụ Chineke nyere iwu ya. Ma e mekwara ka iwu bụrụ ihe ga-eme ka ọnụ ndị mmadụ nile dere duu, ka mmadụ nile nọ nꞌụwa mata na nꞌihu Chineke ha bụ ndị ikpe mara.
Nꞌihi na o nweghị onye ọ bụla a pụrụ ịgụ nꞌonye ezi omume nꞌihu Chineke maka na o debere iwu. Kama ihe iwu na-eme bụ igosi anyị na anyị bụ ndị mmehie.
Ma ugbu a, Chineke egosila anyị ụzọ ọhụrụ, nke ya na ụmụ mmadụ ga-esi dịrị nꞌudo. Ọ bụghị ụzọ metụtara idebe iwu. Ọ bụ ụzọ ọhụrụ. Nꞌezie, ọ bụghị ụzọ ọhụrụ, nꞌihi na ndị amụma agbaalarị ama, e dekwara ya nꞌakwụkwọ iwu, na Chineke ga-eme ihe dị otu a.
Chineke ekwuola na ya ga-anabata anyị, gụọ anyị na ndị na-emeghị mmehie, ma ọ bụrụ na anyị ekwere na Jisọs Kraịst. Chineke na-anabatakwa ndị nile kweere na Kraịst na-ajụghị ajụjụ ma ha bụ ndị Juu ma ọ bụkwanụ ndị mba ọzọ.
Ma ugbu a, Chineke na-agụ anyị na ndị ezi omume site nꞌamara ya, nke ọ na-enye nꞌefu, site na Kraịst Jisọs, onye sitere nꞌọnwụ nke ọ nwụrụ gbapụta anyị, mee ka anyị nwere onwe anyị.
Ugbu a, Chineke na-anabata ndị mmehie site nꞌụzọ a igosikwa na ya bụ onye na-ekpe ikpe ziri ezi na Onye ahụ na-agụ ndị nile nwere okwukwe nꞌime Jisọs dị ka ndị na-emeghị mmehie.
Ọ bụrụ na o si otu a dịrị, ọ dị ihe inya isi ọ bụla dị nye anyị? Chineke ọ zọpụtara anyị nꞌihi na anyị debere iwu? É,è, nzọpụta anyị dabeere nꞌokwukwe anyị nwere nꞌime Kraịst.
Ya mere Chineke zọpụtara anyị nꞌihi okwukwe anyị nwere na Kraịst, ọ bụghị nꞌihi na anyị mere ihe iwu kwuru.
Chineke ọ na-azọpụta nanị ndị Juu? Mba! Nꞌihi na Chineke bụkwa Chineke ndị mba ọzọ. Ọ ga-anabatakwa ndị mba ọzọ bụ ndị bịakwutere ya site nꞌokwukwe nꞌime Kraịst.
Nꞌihi na dị ka Chineke si emeso ndị Juu omume, otu a ka o si emesokwa ndị mba ọzọ. Ọ ga-anabata ndị Juu nile kweere na Kraịst, nabatakwa ndị mba ọzọ site nꞌokwukwe ha nꞌime Jisọs Kraịst.
Ọ bụrụ na Chineke na-anabata anyị site nꞌokwukwe anyị nwere na Kraịst, ọ̀ pụtara na iwu adịkwaghị mkpa? Mba! Kama anyị na-enye iwu ọnọdụ kwesịrị ya.